जाजरकोटी युवालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ ः अध्यक्ष खत्री – Vision Khabar
। १६ आश्विन २०७५, मंगलवार १०:५८ मा प्रकाशित
अध्यक्ष, जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघ
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर—२ तिमीलेको सामान्य परीवारमा जन्मिएका कर्ण बहादुर खत्री सानै देखि पढाईमा रुचि राख्ने । गाउँकै कालीका प्रा.वि. डिँगा बाट सुरु भएको उनको शैक्षिक यात्रा त्रिभुवन मा.वि. खलंगा, लक्ष्मी प्राप्ती मा.वि. खुर्पा हुँदै शंकर मा.बि. बाहुनथानासम्म पुग्दा एसएलसी पास गरे । त्यसपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ काठमाण्डौँबाट इलेक्ट्रोनिक्स ३ बिधाबाट सिटीभिटी लेबल टु गरे । साथै कलर टिभी, सोलार र मोबाईलसम्बन्धी अध्ययन गरी वि.सं. २०६१ बैशाख ०१ देखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा घडि रेडियो मर्मतसम्बन्धी ब्यापार सुरु गरेका थिए । २०६४ सालमा उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटको साधारण सदस्य भई संगठनभित्र होमिएका खत्री २०७४ असोज २२ गते सम्पन्न भएको जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भद्र बहादुर वलीलाई ८३ मन्तान्तरले हराए । निर्वाचित भईसकेपछि हालसम्म भएका विविध गतिविधि र आगामी दिनको योजनाबारे खत्रीसंग भिजन खबर लागि रेशम बहादुर खडकाले गरेको कुराकानीको सारंश ।
१ – तपाई उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटको अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको करिव एक वर्ष पुग्न लागेको छ, तपाईको जाजरकोटको औधोगिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन चाहानुहुन्छ ?
सर्वप्रथम नेपालीहरुको महान चाड बिजया दशमीको अवसरमा सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु । हामीले उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटको तर्फबाट आर्थिक समृद्धिको रुपमा नारा अगाडि सारेका छौं । असोज २२ मा विजयी भएको एक वर्ष पुरा हुँदैछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व होमिँदै गरेको जुन मेरो टिम को एजेन्डा थियो हामी एकपछि अर्को एजेण्डाका विषयमा भन्नुपर्दा हामीले धेरै कुराहरु राखेका छौँ । उद्योगी ब्यापारीहरुको हक हितको लागि निर्वाचन अघि हुने घोषणा सभामा पनि केही राखेका छौं । किनभने आजभोलि हामी सोही अनुसार कार्यान्वयनको अवस्थामा छौँ ।
हामी सबै नेतृत्ववर्गको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्ने हो । संघले गर्ने आर्थिक समृद्धिका जति पनि कुराहरु हुन्छन यसमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समेटेर सम्पूर्ण जनताको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि संघबाट हुने कामहरु हुन्छन् त्यसको लागि हाम्रो भूमिका सहयोग र साथ निरन्तर रुपमा रहनेछ । जिल्ला भित्र रहेका ब्यापारीहरु हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएकोले व्यापारी व्यवसायीहरुको समस्या भनेको त्बह, ख्बत राजस्वका कुराहरु रहेका छन् । त्यसले गर्दा हिजोका दिनदेखि रहेको मिक्सम्याचका कुराहरु अन्त्य गर्नका लागि अहिले जति पनि अन्डरविलिङका कुराहरु भैराखेका छन् यसलाई हामीले सबैलाइ सर्बमान्य तरिकाले अगाडि बढनको लागि लबि¨मा लागेका छौं ।
यसले गर्दा भोलिका दिनमा जतिपनि अहिले संघमा उद्योगी व्यवसायीहरु छन उहाँहरुले यो काम गरिदिनुभयो भनेदेखि हामी बीचमा बसेर काम गर्ने मध्यमवर्गीय व्यवसायीहरु बिभिन्न स्थानीय तहमा बसेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरुले भोलि आन्दोलन गर्ननपर्ने देखिन्छ । यो मुख्य उद्घोष रहेको छ । यहाँका ठुला तथा साना बजारहरुमा बजार व्यवस्थापन समिति गठन भैसकेका छन् र उहाँहरु मार्फत आएका समस्याको सहज तरीकाले सम्बोधन गर्दै आएको जानकारी गराउँछु र नलगाड उद्योग बाणिज्य संघको साधारण सभा भैसकेको छ भने छेडागाडको उद्योग बाणिज्य संगठनको पक्रृयामा छ ।
गाउँपालिकामा उद्योग ब्यवसायहरु दर्ता गरेको संख्या कमी भएकाले गाउँपाउपालिका स्तरीय इकाई कमिटि बनाउन गाह्रो भएको छ ।
व्यवसाय दर्ता सजिलो र छिटो भएको स्थायी लेखा नम्बर लिनको लागि हाल ब्यापारीहरु प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज जानु नपर्ने भयको छ । आन्तरीक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज संग समनोय गरी जाजरकेट उधोग बाणिज्य संघ को अफीस बाट स्थाई पान नंबर फोटोकपी दिनेर सक्कली प्रमाण पत्र स्थाई पान नंबर प्रमाणपत्र ल्याईदीने गरेका छौ र केही बाँकी यजेन्डा कर्मीक रुपले पुरा गर्ने पर्ती बदता जायर गर्द छौ ।
२–जाजरकोटमा रहेका समस्याहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
महासंघका कार्यक्रमहरु प्रत्यक जिल्ला–जिल्लामा रहेका हुन्छन् । अहिले नयाँ कार्यक्रमहरु पनि आएका छन् । जाजरकोटमा उधोग बाणिज्य संबन्धी भयका केही निती गत समस्या देश संगीयतामा‘ गैसकेपछी पकै पनी छन । स्थानीय तहहरुले निजी क्षेत्र लाई वास्था नगर्नु प्रमुख दुर्भाग्य पुर्ण समस्या हो । निजी क्षेत्र बिना स्थानीय तह कसरी सम्पन्न साली होलान यो बहस को बिषय बनेको छ ।
यस्तै प्रकृतीका अन्य समस्याहरु को समाधान को लागी कार्य समीती र अग्रज ब्यापारी हरु बोलाई केही निणय गरी प्रदेश उधोग बाणिज्य संग हुदै महासंग संम्म बहस गरी माहासंग का अध्यक्ष भबानी राणा मार्फत नेपाल सरकार संम्म पुर्याउ छौ । यस्को उदारण कर को बिषयले चर्चा पाउनु पनी एक हो । भोलिका दिनहरुमा नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु आएभने हामी केन्द्रमा आफ्नो जिल्ला जिल्लालाई सेक्टर अनुसार प्राथमिकता दिनेछौं त्यसको लागि हामीले नेतृत्ववर्गलाई सुसूचित गराउने कामहरु गर्छाैं ।
३ – युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ, ति युवाहरुलाई रोक्न केही योजनाहरु छन् ?
जहाँसम्म लाग्छ युवाहरुको बानी बिग्रिसकेको छ । साँचीकै छातीमा हात राखेर बोल्नु पर्दा युवा बिदेशीना बाट रोखि रोजगारिको अवसर सृजना गर्ने ताकत निजि क्षेत्रमा मात्र छ । यसका लागि जाजरकोट जिल्लाको सनदर्भमा स्थानीय तहहरुले प्रोफाइलमा कुन वडाम कुन बस्तु उत्तपादन गर्न सकिन्छ बिषय बिज्ञय सहित अध्यन अबलोकन प्रामर्श लिन जरुरी छ । प्रत्यक वडाहरुको अफनौ पहिचान हुन जरुरी छ । एक गाउँ एक उत्पादन लाइ बिश्यस जोड दिएमा अवश्य युवा पंतिहरुलाई स्वरोजगारी वनाउन सकिने देखिन्छ । जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघले जाजरकोटमा सम्भावना भएका जेम्स कम्पनी टिमुर खेति ,मह उत्पादन ,बाख्रापालन ,बेमौसमि तरकारी खेती , र पोल्टी फमको प्रचुल सम्भावना लाइ अध्यन गरि युवाहरुलाई उत्पीडित गरेका छौ । यसले केहि युवाहरुलाइ रोजगारी दिएको छ ।
अन्य ब्यरोजगार युवाहरुको पनि यसमा रुचि बढदो पाएका छौ । जाजरकोटमा हाडो पावरहरु लघु जलबिधुत हरुको अथा सम्भावना रहेको छ। यसमा केन्द्रीय स्थरका जनप्रतीनिधिहरुको पहुच नपुग्नु सम्वन्धीत निकायले ब्यवस्था गर्नुले केही जल माफियाहरुले खोला र नदी ब्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी काम नर्गनाले हाल भएको स्रोत ओझेलमा परेको छ । यता तीर पनी समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगीरीका बाधक भयका छन र पर्टन पर्बधन का लागी जैबीक संम्पदा को संरक्षन सिग्र गरीनु पर्छ । जिल्ला भित्र प्रसस्त रहेको जडीबुटी पाँच आउले ,टिमुर ,सतुवा ,बाह्र आउले ,यार्सा गुम्वा ,आदि बिभिन्न जौबिक बिभित्ता हाल सखाप परीदैछ भने चोरी सीकारी नियन्त्रन अझै हुन सकेको छैन ।
यस्ता दैनिक हुने चोरी सिकारी लाई अनत्य गर्नको लागि स्थानीय सरकारले खबदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले आगामि दिनमा यस्तो कदम चालेमा ब्यवसाय उद्योगमा केही युवाले रोजगारी को अबसर पाउने छन । हामीले खानी पानी र जवानी लाई उपयोग गर्ने हो भने जाजरकोटी युवा बिदेशीनु पर्दैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हामी बनाउछौ ।
४– काईनाइट उत्खनन कार्य सुस्त गतिमा बढेको छ, जाजरकोटमा अरु कुनै योजनाहरु छन् ?
जाजरकोट जिल्ला काइनाइट तुरमाली प्रसंस्त भएको जिल्लाहो यस क्षेत्र भएको काइनाईट तुरमाली उद्योगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । आफ्नै ठाउँमा उद्योगहरु स्थापना भए भने त्यहाँ रोजगारको सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक क्रान्तिमा सहयोग पु¥याउँछ । जाजकोट लाइ जेम्स कम्पनी हामीले सोचे जस्तो सफल्ता हासील गर्न सकेनौ यसमा पहीलो गास मै ढुगंगा लागे जल्तो भो तर केही हुदै नभएको हैन हाल जिल्लाम साना उद्योगहरु सञ्चालनमा त छन तर भनेअनुसार नभयरो मात्र हो केही उधोग संचालन मा छन र हामी अझै यस्को अधयन र कम्पनी बिस्तारको पहल गरी राखेका छौं । यदी स्थानीय तह ले चासो दिने हो भने छिटै बिस्तार गर्न सकीन्छ ।
६ –जाजरकोट लाई कृषि क्षेत्रमा समृद्ध बनाउन उद्योग वाणिज्य संघले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
उच्च मुल्य कृषि बस्तु बिकास आयोजना (ज्ख्ब्ए) र जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघको साझेदारीमा कृषि बिकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष (क्ष्ँब्त्) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजना मार्फत रोड कोरीडोर बाट ३ देखि ५ घण्टा सम्म पैदल यात्राबाट आवत जावत गर्न सकिने जाजरकोटका थुप्रौ गाउँ बस्तीहरुमा कृषि क्षेत्रमा केहि परिवर्तन भएको पकै देख्न सक्नु हुन्छ । जिल्लाको भित्रको टमाटर उत्पादन भएको टमाटरहरु वुटोल ,जुम्ला सम्म पुगिरहेको छ । जिल्लाको छेडागाड ,जुनिचाँदे ,कुशे गाउँपालिकाको टिमुर जर्मन ,अष्टेलीया सम्म पुगेको छ । बाँकि टिमुरको लागि डाबर नेपाल कम्पनीले माग गरिरहेको छ । जिल्ला भित्र मासु ब्यवसायमा आत्म निर्भर रहेको छ ।
पोल्टी तथा बाख्रा फमहरुमा दैनीक युवाहरुको आक्रषण बढदौ गएको छ भने जाजरकोट डोल्पा सडक यात्रा गर्दा आफैपनि जिल्लाको बिभिन्न ठाउमा अबलोकन गर्न सकिन्छ । हालसम्म हरेक क्षेत्रमा भैरहेको कामहरु जति छन् त्यो सबै पब्लिक रुपमै भएका छन् । यो कुरा निर्वाचन पछि राज्यले गर्नुपर्ने हो । जाजरकोट जिल्ला कृषिमा मजबुत क्षेत्र हो । हामी कृषिमा धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं । तरपनि केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जबसम्म सरकारले बाजो जग्गा नियमित खेति गर्नको लागि बिशेष निति निर्माण तथा कृषकहरु लाई ब्यावसायिक रुपमा कामगनृको लागि उतप्रेणा मुखि काम लगाउदैन तबसम्म यो सम्भव छैन । अहिले पनि जति पनि कृषियोग्य जमिनहरु छन् ती सबै ठाउँमा बाजो देख्न पाइन्छ । दैनिक हजारौ युवाहरु बिदेश जान बाध्य छन् । तर, यता नेपालमा उर्भर भुमि वाँजो मात्र छन् यसले पनि ब्यरोजगारी स्वभाबिक देख्न सकिन्छ ।
७– उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि सहुलियत ऋणको सुविधा पाउनै कठिन छ भनिन्छ नि ?
बैक हरुको कागजि प्रकृयाहरु झनजटिलो छ । बैक मुल्या¨ान स्वइक्षा रहेको छ । साथै बैंकले पनि विश्वासयोग्य मानिसहरुलाई ऋणहरु दिइरहेका छन् । बैंकले पनि कामको मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरेको छैन मान्छे हेरेर ऋण प्रदान गरिरहेको छ । साथै बैक अनुसार फरक ब्याज दर हुनु ब्याजदर लिदा सर्त बिपरित जानु लगाएतका थुर्पै समस्या छन । यस्ले गर्दा धेरै ब्यापारी लाई घाटा ब्यहोर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । हामी उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई के भनिराखेका छौं भने कुन ब्यवसाय वा उद्योग सञ्चान गर्ने हो त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नुस् । व्यापार व्यवसाय गर्न ब्यवसाय योजना भए खासै गाह्रो छैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको जाजरकोट जिल्ला लाई औद्योगिक क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने हो ।
यसमा हामीले निरन्तर रुपमा कुरा उठाइरहेका पनि छौं र सरकारले पनि युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ऋण धेरै युवा उद्यमी तथा सहकारी हरुलाई न्युन ब्याजदरमा पाएका छन । यसलाइ सबैको पहुच पुग्नेगरि गरि लाग्नु पर्ने देखिन्छ । हामीले उद्योग ब्यवसायी हरुलाई सहुलियत ऋणको सुविधा पाउनको लागि जिल्ला स्थरीय बैकहरु संग समन्वय गरि आगामि दिनमा उद्यमी ब्यावसायि हरुको माग पुरा गर्ने छौं । हाम्रो संघको नयाँ नीति अन्तर्गत आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्यको लागि यो कुरा पनि फोकस हुनेछ ।
८ तपाईको कार्यकालमा जाजरकोट उद्योग बाणिज्य संघ द्धारा सञ्चालीत कृर्षि पर्यटन तथा ब्यापार मेलाको आयोजना गर्नु भयो तर उत्त मेलाको आर्थिक लेखाजोखा सार्वजनिक भएन भन्ने गुनासो छ ?
आर्थिक लेखाजोखा सार्वजनिक भएको हो । हामीले उद्योग बाणिज्य संघ जाजरकोटको तर्फबाट पत्रकार समेलन गरि आर्थिक लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएको हो । कुनै ब्यक्तिहरुले गुनासो गरे होलान त्यो स्वभाबिक हो । जाजरकोट जिल्लाम काम गर्ने भन्दापनि कुरा गर्ने धेरै छन त्यो हजुर हरुलाइ पनि जानकारी होला यो बिषयमा हाम्रो तर्फ बाट कुनै दुई मत छैन । आवश्यक परेको खण्डमा कार्यालय समयमा महासंघको कार्यालयमा आएर लिन सक्नु हुन्छ ।
९ तपाई उद्योग बाणिज्य संघ जाजरकोटको अध्यक्ष भए पछि बिभिन्न देशको भ्रमण गर्नु भयो हजुरको भ्रमण कस्तो रहयो ?
सब भन्दा पहिले मलाई जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचन वनाउने सम्पुर्ण उद्योगि ब्यापारी हरुलाई हृदय देखि आभार ब्यत्त गर्दछु । मलाई सबै आम ब्यापारी उद्योगी हरुको सहयोगले बिभिन्न देश जाने अवसर मिल्यो र थप केही देश जाने तयारीमा छु । भ्रमणको क्रममा मेरो मन छोएको कुरा देश बिकासको लागि स्वयम नागरिक जिमेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । देशमा रहेको सरकार सम्बन्धीत निति नियमहरु जनतालाई मान्य हुने किसिमको कडा हुनुपर्ने महसुस गरे । बिकास प्रकृति अनुकुल हुनुपर्दछ । शिक्षा ब्यरोजगारी बनाउने कम्पनी हैन नेपालमा शिक्षा प्रणाली लाई ब्यवाहरीक र परिणाम मुखि बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपाल को शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कम्पनी भयको देख्दा सारै दुख्ख लाग्छ लोकतन्त्र देखी गनतन्त्र संम्म देश आइपुग्दा र लोक पिर्य मौलीक्ता जन्ता ले बोल्न भने पाउने अधीकार हुनु पर्न् भन्दा बडी भय जस्तो लाग्छ । यहा जले जेगरेपनी हुने जे भनेपनी हुने सो कस्तो मौलीक्ता हो र नेपाल जती सत्ता र शक्ती को दुरपयोग अन्य देश छैन भन्दा पनी हुन्छ
अन्य देश राज्य को सिस्टम मा चल्छन भने हामी सत्ता र शक्तीमा चल्छौ अरु देश का नागरीक आफ्नो देश लाइ संम्बृधी बनाउन रात दीन खट्टीन्छन भने हा‘मी देश कम्जोर बनाउन भरस्टचार देखी देश बन्द र आन्दोलन गर्छौ र खै परीबर्तन केगर्यो सरकार ले भन्दै दरो आदर्ष दिन्छौ । तेसैले अब आम नागरीक जिम्मेवार हुनै पर्छ र सुरुवात हामी बाट गर्नु पर्छ ।
पहीले त तपाइ को भिजन खबर अनलाइन पत्रीका ले जाजरकोट उधोग बानिज्य संघले भाबि योजना सम्पन्न कार्यको सवाल जनतामाज प्रसारण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म जाजरकोट उद्योग बाण्ज्यि संघ जाजरकोट र मेरो ब्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभारी ब्यक्त गर्द छु । निजी क्षत्र को नेत्रितो मा हुमीदा गरेको जुन मेरो टिम को एजेन्डा थियो हामी ऐक पछी अर्को एजेन्डा पुरा गर्न लागी परेका छौ । जाजकोटमा नेपाल सरकार को कानुन लाइ मध्यनजर गरि ब्यपार ब्यवसाय र उद्योग कल कार्खाना दर्ता गरी संचालन गर्दै आउनु भएका ब्यवसायि हरुको हक हित को लागी ब्यवसाय बिस्तार गर्नको लागि घुम्नते झोले कुम्ले ब्यापारी लाई निरउत्साहीक गरी दर्ता प्रकृया नगरि उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगिहरुलाइ करको दायरामा ल्यायउने पर्यास को थालनी जाजरकोट उद्योग बाण्ज्यि संघले गरिरहेको छ ।
साथै जाजरकोट जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तह हरु संग आवश्यक निति निर्माणको लागि छलफल जारी रहेको छ । जाजरकोट जिल्लामा ठुला तथा साना बजार हरुमा बजार ब्यवस्थापन समीती गठन भैसकेका छन । भेरी नगरपालीका संग समन्वय गरी लिखीत रुपमै केही संम्झौता भएका छन जाजरकोट उधोग बाण्ज्यि संग को मर्म बुझी सुरुवात गर्दीनु भयको मा नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्ती ज्यू कार्यकारी अधिकृत ज्यु सबै वडा अध्यक्ष लगायक संम्पुरण टिम लाई धन्यबाद दिन चाहान्छौ र अन्य केही बाकी यजेन्डा कर्मीक रुपले पुरा प्रतिबद्धता जायर गर्द छु । अत्यमा फेरी पनी आउदै गरेको बिजया दशमिको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । जाजकोट उधोग बाण्ज्यि संग सम्पुण्मा ब्यवसायि सदस्य र आम उपभोक्ता को हक र हित सदा लागी रहने छु